पत्रकार ऋषि धमलालाई अहिलेसम्मकै ठूलो माला लगाएर भव्य स्वागत ! – Life Nepali
पत्रकार ऋषि धमलालाई अहिलेसम्मकै ठूलो माला लगाएर भव्य स्वागत !
सर्लाही, रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले क्लबको सर्लाही जिल्ला शाखा कार्यालयको नयाँ भवनको उद्घाटन गरेका छन् । आइतबार सर्लाहीको होटल कुशुम प्यालेसमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर उक्त भवनको उद्घाटन गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौंबाट प्रभुको हेलिकप्टरमार्फत सर्लाही आएका धमलालाई यहाँका स्थानीय जनता तथा पत्रकारहरुले भव्य स्वागत गरेका थिए ।स्थानीयहरुले धमलालाई हेलिकप्टरबाट ओर्लिनेबित्तिकै फूलमाला, अविर, दोसल्ला र खादा ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।
यहाँ उपस्थिति जनताले पत्रकार धमलालाई अहिलेसम्मकै ठूलो माला लगाएर सम्मान गरेका थिए । सम्भवतः एक क्विन्टलको माला पहिराएका थिए । स्वागतमा सहभागी एक जना युवा भन्दै थिए,‘मधेशमा हामीले यति ठूलो माला कसैलाई पनि लगाईएको मलाई थाहा छैन् । यो धमला सरप्रतिको क्रेज हो । मधेशमा उहाँलाई धेरै रुचाईन्छ । उहाँलाई हेर्नकै लागिपनि यो भीड लागेको हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।’धमलाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको सर्लाही शाखा कार्यालय भवनको उद्धघाटन् गर्दै आफूलाई गरिएको सम्मानप्रति आभार व्यक्त गरे ।
उनले सम्बोधनको क्रममा समग्र तराई–मधेशको विकासको लागि सशक्त अभियान सुरु गर्ने उद्धघोष गरे । धमलाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि पनि पहल गर्ने विश्वास दिलाए । देशको विकास र समृद्धिको लागि साझा संकल्प बोकेको नेता चाहिने पनि उनको भनाई थियो ।उनले सवल, सक्षम र जनताप्रति ईमानदार नेताको खाँचो रहेको पनि सुनाए । ‘नेता भनेको त राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्यो । जनताप्रति पूर्ण बफादार हुनुपर्छ । राजनीति भनेको त सेवा गर्ने कुरा हो । नेताले देशलाई माया गर्नुपर्यो । जुनसुकै पार्टीको नेता भएपनि पार्टीभन्दा माथि उठ्न्पर्छ ।’–उनले भने ।
उनले मधेशको भूमी कृषिको उर्वर भएकोले यहाँको समृद्धिको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘विकास र समृद्धिको यात्रामा हामी सबैले हातोमालो गर्नुपर्छ । मधेशमा धेरै समस्या छ । अहिलेपनि यहाँ दाईजो प्रथा छ, यसको उन्मुलको लागि आजैबाट म लाग्छु । मधेशमा मात्रै होईन, देशबाटै दाईजो हटाउनुपर्छ । मधेशबाट सुरु गरौं ।’ अझैपनि मधेशमा विकृति, विसंगति र कुरीति व्याप्त भएको सुनाउँदै यी सबै अन्त्यको लागि पनि शिघ्र अभियानको खाँचो रहेको धमलाको भनाई छ ।मधेशको विकास र समृद्धिको लागि अरुले भन्दापनि यहाँका नेता तथा सरकारमा बसेकाहरुले विशेष भूमिका हुने भन्दै प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै काम गर्नुपर्ने धमलाले सुझाए ।
उनले भने,‘यो प्रदशेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले काम गर्नुपर्छ । अब कुरा र बहस होईन काम गरौं ।’ उनले देशको विकास र समृद्धिको लागि मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति, सहकार्य र एकता अनिवार्य आवश्यकत्ता भएको पनि औंल्याए ।उनले भने, ‘ओली, प्रचण्ड र देउवा एकजुट भएर देशको विकास र समृद्धिको लागि लाग्नुहोस भन्न चाहन्छु । हाम्रो देश प्राकृतिक रुपमा धनी छ । यो देश बनाउनको लागि धेरै समय लाग्दैन् । दश वषैभित्रै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । देशको मुहार परिवर्तन गर्ने अभियानमा आजैबाट लागौं ।’
धमलाले अहिलेसम्म मधेशको भूमीमा जन्मिएर देशको प्रधानमन्त्री नबनेको ईतिहास सुनाउँदै अब मधेशको भूमीमा जन्मिएका व्यक्ति देशको कार्यकारी पदमा पुग्नुपर्ने पनि सुनाए । उनले भने,‘अब यही भूमीमा जन्मिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऔं ।’उनले अहिले सम्म मधेशी जनताले संविधान संशोधनको लागि माग गरेको सुनाउँदै भने,‘एकचोटी संविधान संशोधनको माग गरेका सबै समूदायको आवाजलाई सरकारले सुन्नुपर्छ ।संविधान संशोधन गराउनको लागि म पनि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छु । यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गर्छु ।
मधेशी, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकको लागि एकचोटी संविधान संशोधन गरौं ।’उनले अब देश बनाउनको लागि राजनीतिक मुद्दालाई सदाका लागि छोडेर अब आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित हुने समय आएको पनि सुनाए । उनले भने,‘देशमा सुशासनको प्रत्याभुति दिउँ । नेता र कर्मचारी मिलेर देश बनाउँ ।’धमलाले पत्रकारिता क्षेत्र नेपालका हरेक परिवर्तनको सम्वाहक भएको सुनाउँदै अब पनि पत्रकारिताको भूमिका सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘नेपाली पत्रकारिताले देशका हरेक आन्दोलनमा सशक्त भूमिका खेलेको गर्विलो ईतिहास छ ।
अब एकपटक नेपाली पत्रकारिता मुलुकको समृद्धिको लागि सशक्त माध्यम बनेर आउनुपर्छ । म ऋीष धमला मुलुकको विकास र समृद्धिको एजेण्डामा सशक्त आवाज बनेर आउने प्रण गर्नेछु । व्यवसायिक पत्रकारिताको लागि पत्रकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’प्रत्येक गाउँमा भएका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि पत्रकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने पनि उनको जोड छ । उनले भने,‘रिपोर्टर्स क्लबको ध्यान मधेशमा केन्द्रित छ । प्रत्येक वर्ष मधेशका दुई जना पत्रकारलाई वार्षिक रुपमा सम्मान गर्ने पनि म यही मञ्चबाट घोषणा गर्छु ।’ धमलाले आजै रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २ नम्बर प्रदशेको अधिवेशनको उद्धघाटन् गरेका छन् ।
Previous विवाहको तयारीमा पुर्व मिस नेपाल मलिना जोशी
Next अविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न प्र’तिब’न्ध, !
कञ्चनपुरमा विवाहमा गएका जन्ती ५ घण्टा घाममा होल्ड
4 days ago Life Nepali
देबर भाउजु जंगलमा एस्तो गर्दै गरेको भेटियो कैद भयो यो एस्तो दृश्य भाइरल (हेर्नुस् भिडियो सहित)
1 week ago Life Nepali
छोरिछोरि छन् भने अब छोरा जन्माउन सकिने,छोराछोरा छन् छोरी जन्माउन सकिने ,यस्तो छ उपाय (हेर्नुस् भिडियो )
श्रीमानले छोडे, काठामाडौंको कोठामा २ दिनदेखि भोकभोकै रहेका ३ बर्षे छोरी र आमाको रुवाबासी । शिशिर भण्डारी सहयोग लिएर पुगे (भिडियो हेर्नुस)
डाक्टरको लापरबाहीले अभिनेता राहुल बोहराको गयो ज्यान, मृत्युअघि अक्सिजनको साटो मास्क मात्रै लगाइदिएको यस्तो भिडियो बाहिरियो
लापर्बाहीका कारण नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलियो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रभु सेलेक्ट फन्डको प्राथमिक निष्काशन तथा बिक्री खुला हुँदै, जेष्ठ ५ देखि ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
10 hours ago Life Nepali
1 day ago Life Nepali